Agwaetiti Cayman: Nchịkọta COVID-19 nke njem nlegharị anya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Agwaetiti Cayman: Nchịkọta COVID-19 nke njem nlegharị anya
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Cayman Islands • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
na Covid-19 pịa ogbako taa, Tuesday 19 Mee 2020, ekwuputara okwu ikpe 17, sitere na nsonaazụ 1182 gosipụtara na ngwụcha izu.
Ndị isi agwaetiti Cayman gbara ndị mmadụ ume ka ha kpachara anya, na-eme mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ịsa aka ha na itinye ihe nkpuchi na mpaghara ọha, n'agbanyeghị ezumike nke izu ike nke malitere na taa na Grand Cayman.
Onye nlekọta ahụike, Dr. John Lee kọrọ, sị:
Site na nsonaazụ nyocha 1182 emere na ngwụcha izu ụka (1088 na HSA na 94 na Hospitallọ Ọgwụ Dọkịta), ekwuputara 17 sitere na mmemme nyocha (gụnyere ikpe abụọ na Cayman Brac na abụọ na HMP Northward) na 1165 na-adịghị mma.
Site na nọmba ndị a, ọnụego dị mma bụ 1.44% (17 sitere na ule 1182). Ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke nkezi dị mma n'oge gara aga bụ 2.57%,
Nyocha nke ndị ọrụ ahụ ike na-emezu ma nyocha nke ndị ọrụ ndị ọzọ, gụnyere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ ụlọ ahịa, na-aga nke ọma, gụnyere imirikiti ụlọ mkpọrọ ahụ anwalela; nyocha ugbu a amalitekwala maka ụlọ ọrụ ihe owuwu.
Site na ikpe 111 dị mma ruo ugbu a, 3 emeela na Cayman Brac, 12 na-arịa ọrịa, 43 na-enweghị nsogbu, ọ dịghị mmadụ nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a na mmadụ 55 agbakeela.
'Lọ ọgwụ 'flu' nwere nleta 10 n'etiti 15 na 18 May na 'flu hotline nwere oku 62 mana 52 enweghị njikọ na mgbaàmà, ha bụ oku nchịkwa, dịka ndị na-ajụ maka nsonaazụ ule.
Ngwa nyocha nke HSA ga-enweta ụbọchị mmezi ya na Tọzdee, 21 Mee.
Onye isi ala Hon. Alden McLaughlin kwuru, sị:
Ozi taa bụ na site na nyocha ọhụụ iri na asaa, ihe niile na-apụ apụ ma chọpụta site na nnwale dị mma, ezigbo ihe ngosi bụ na nje ahụ ka gbasara anyị na mpaghara obodo ọ bụ ezie na ọnụọgụ ahụ dị obere. Ọ dị mkpa ịhapụ onwe gị, saa aka gị mgbe niile ma kpuchie ihe mkpuchi na oghere ọha na eze adịghị adalata.
Atụmatụ gọọmentị banyere imeghe akụ na ụba na-etinye n'ọrụ n'ụzọ a na-achịkwa ma jikwaa, nke mere na nje ahụ anaghị apụ n'obodo nke na-eme usoro anyị mejuputara ugbu a. Anyị achọghị ịrụsi ọrụ ike na aja anyị niile nyere na ya, bụrụ ihe efu ma yabụ anyị ji nwayọ nwayọ nwayọ.
Ule nke ngalaba ihe owuwu amalitela ma ga-aga n'ihu n'ime izu abụọ na-esote. Ndị ọrụ NRA a nwalere amalitelarị ụzọ ụzọ na ezigbo ọganihu emere na ngwụcha izu ụka.
Ọnọdụ akụ na ụba na-emepe, n'agbanyeghị nwayọ. Anyị chọrọ ka nke a bụrụ ihe ịga nke ọma; anyị achọghị ịta ahụhụ ndọghachi azụ ndị a hụrụ n'ọchịchị ndị ọzọ. Maka ọdịnihu dị nso, anyị ga na-eme omume mmekọrịta ọha na eze ọhụrụ ndị a nabatara n'oge ọrịa a ruo mgbe achọtara ọgwụ mgbochi ma ọ bụ nje ahụ agbapụ.
Anyị anaghị eche echiche imeghe oke ala anyị ruo mgbe ọ ga-adị mma ịme ya.
Nzukọ Iwu ga-ezukọ echi (Wednesday, 20 May) iji kwurịta ọtụtụ ụgwọ metụtara ụlọ ọrụ ego. Ọ bụrụ na nnọkọ ahụ gafere na Tọzdee, a ga-eyigharị okwu nkowa a rue Fraịde 22 Mee.
Onye isi Gọvanọ, Maazị Martyn Roper kwuru, sị:
Okwu ikpe 17 karịa ụbọchị anọ, na nyocha 1182 emechara bụ ihe ịrịba ama nke ọrụ pụtara ìhè nke ndị na-eme ule ahụ.
Agwaetiti Cayman anwalela 10% nke ndị bi na ya, na-etinye anyị asatọ n'ime ule ụwa niile n'otu isi.
Ka anyị na-emeghe aku na uba, ekwela ka gị na nche. Nọrọ n’ụlọ n’ebe ọ bụla o kwere mee.
Onye isi ụlọ mkpọrọ na ndị ọrụ ya arụla ọrụ ọsọ ọsọ ma baa uru. Nnyocha ụlọ mkpọrọ na-eme ka ọdịmma na nchekwa nke ndị ọrụ na ndị mkpọrọ mara.
Flightgbọ njem Mbugharị na Manila, Philippines site na London na Satọde, 23 May nwere ugbu a.
A ga-ahazi ụgbọ elu ndị ọzọ na Miami, mana ha agaghị eweghachi onye ọ bụla na Cayman Islands dịka facilitylọ Ọrụ Mwepu nke Gọọmentị dị ugbu a.
Ọganihu na ndị ọchịchị India na-ahazi ụgbọ elu ịgbapụ. Ma enweghị ọganihu na ụgbọ elu Jamaica ma ọ bụ Nicaragua n'oge a.
Otu onye otu lọjistik na ndị otu enyemaka UK nwalere adịghị ike maka COVID-19 tupu ịlaghachi nsonaazụ na-adịghị mma; site n'ọtụtụ ịkpachara anya, ndị ọzọ fọdụrụ ga-anọ iche iche ụbọchị iri na-esote.
Mịnịsta Ahụike Dwayne Seymour kwuru, sị:
Ministri Ahụike emepụtala nduzi na Health Public iji hụ na ebe ọrụ dị mma maka ndị ọrụ na-alaghachi ọrụ.
N'oge mmeghe nke usoro akụ na ụba, ndị ọrụ ga-achọ itinye usoro ahụike na nchekwa, gụnyere ndị ọrụ na-ahọpụta ka ha mejuputa ma hazie sistemụ.
Ndị ọrụ nwere ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ n'ụlọ ga-aga n'ihu na-eme nke a, ma ọ bụghị ya, ndị were ha n'ọrụ kwesịrị itinye usoro dịka mgbanwe nkewa na oge ọrụ agagharị.
A ga-eyi ihe mkpuchi ihu na PPE dịka ihe kwesịrị ekwesị ma dị mkpa yana ịdị ọcha ịsa aka kwesịrị ịdị mma.
Ihe mbụ ga-abụrịrị gbasara ahụ ike.